Country Living Private Bed/Bath -Izaphulelo zanyanga zonke - I-Airbnb
Country Living Private Bed/Bath -Izaphulelo zanyanga zonke
Izaphulelo zanyanga zonke. Kuthule futhi kunokuthula. Igumbi lokulala elizimele elinebhavu langasese, indawo yokungena yangasese, ikhabethe, 55 ku-Smart TV, iNetflix, iFireStick, i-High Speed Internet Wifi, Ikhishi Eligcwele, amabhodwe, amapani, izitsha, izitsha, i-microwave, usinki, ifriji nesitofu, iwasha/isomisi, kanye I-pantry egcwele impahla enensipho, iphepha lasendlini yangasese, amathawula wephepha, amashidi, amathawula, izingubo zokulala, nokunye. Imizuzu engama-20 yePax River kanye neCove Point. Imizuzu emi-5 ukusuka e-Leonardtown & MedStar St. Mary's Hospital.
I-Walkout engaphansi kwe-Bedroom suite endaweni yezwe.
-Igumbi lokulala elikhulu elinendawo eningi yokwelula
-Ibhavu langasese elineShower/Tub
-I-TV enkulu eneSathelayithi
-Ijubane eliphezulu le-inthanethi neNetflix
- Hamba ku-Closet
-Ikhishi elinamabhodwe, amapani, izitsha, izinto zesiliva, kanye, amapuleti/izitsha zephepha.
-Asinazo izilwane ezifuywayo endlini.
-Sinezilwane ezifuywayo zangaphandle:
2) AmaTurkey, Izinkukhu, namaDada asala ezibayeni zawo.
Indawo ethule, enokuthula endaweni yasemakhaya. Ilungele ukuphumula nokuzwana nemvelo, kodwa futhi iseduze ngokwanele nedolobha, izitolo, izitolo, izitolo zegrosa, negalaji likaphethiloli ukuze uphume lapho ufuna.
Imizuzu emi-5 ukusuka esitolo esiseduze, igalaji likaphethiloli, isibhedlela nesitolo segrosa.
Indawo yezivakashi ihlukile endaweni yethu yokuhlala, kodwa siyatholakala ukuze siphendule imibuzo, sinikeze izincomo endaweni futhi senze ukuhlala kwakho kube okuhlangenwe nakho okuhle. Izivakashi ziza ziphinde zihambe ngokuthanda kwazo ngesango eliyimfihlo.
Indawo yezivakashi ihlukile endaweni yethu yokuhlala, kodwa siyatholakala ukuze siphendule imibuzo, sinikeze izincomo endaweni futhi senze ukuhlala kwakho kube okuhlangenwe nakho o…